Zimbabwe Ruling Party To Propose Anti-Sanctions Parliamentary Motion | Voice of America - English
Morgan Tsvangirai, the leader of the Movement for Democratic Change has been sworn in as Zimbabwe's prime minister. In a moment some would classify as pure irony, Zimbabwe Prime Minister Morgan Tsvangirai was sworn in by his arch-rival President Robert Mugabe."Now therefore, I Robert Gabriel Mugabe, president of the Republic of Zimbabwe do hereby call upon you Morgan Richard Tsvangirai to take the oaths, as prescribed by law," Mr. Mugabe said.
Zimbabwe's remaining few hundred white farmers are under intense pressure to abandon their land, crops, homes and workers on the eve of a unity government. Most white farmers were evicted from their land by Zimbabwe President Robert Mugabe's government earlier this decade. Zimbabwe's remaining white commercial farmers are being threatened with violent eviction or charges of trespass. Several top vegetable producers have already been evicted…
Zimbabwe's veteran opposition leader, Morgan Tsvangirai, has been sworn-in as prime minister, setting the stage for the installation of a power-sharing government on Friday. The former labor leader delivered a major electoral defeat to President Robert Mugabe in elections last March.Zimbabwe's new Prime Minister Morgan Tsvangirai defeated President Robert Mugabe in elections last March, but withdrew from the runoff vote citing a campaign of violence against…